Home Wararka Xiligii doorashada loo qorsheeyay oo dib u dhac cusub ku yimid, jadwal...
Waxaa muuqato in dib u dhac weyn ku yimid xiligii loo qorsheeyay in doorashada ku dhacdo, waxaa hada qasaartay ama la lumiyay mudo bil ah, mana jirto tilaabo laga qaaday in la meel mariyo dhamqaan qodobadii loogu soo heshiiyay heshiiskii 27 Bish Maajo ee lagu saxiixay magalada Muqdisho.
Arimaha aan wali waxba laga qaban waxaa ka mida; Nabadaynta deegaanada hoostaga Hirshabeela iyo Gobolka Gedo, dhaqaale u uruurinta doorashada oo aan wali gacanta lagu haynin, amniga doorashada oo wali meel aan la isla saarin, deegaan Doorasheedku in laga dhigo hal deegaan oo ah Caasimadaha Dowlad Goboleedyada Caqabad Amni awgeed oo aan wali si buuxda loo shaacin, tirada Ergooyinka oo ay lama human tahay in laga dhigo 51 dhaqaalo daro jirto awgeed.
Waxaa la rumeysan yahay in shirka uu Sabtida shaaciyey ra’iisal wasaaraha xukuumadda xil-gaarsiinta ee ay iskugu imaanayaan Madaxda Golaha Wada-tashiga Qaran in wax ka bedel lagu sameyn doono Jadwalka doorashada, taas oo macnaheedu tahay in ugu yaraan labo bilood oo cusub lagu kordhin doono qorshaha doorashooyinka.
Previous articleAl-Shabaab oo weerar ka fulisay Magaalada Mandera, kuna dishay sarkaal katirsan ciidanka Kenya
Cabdi Xashi oo ku eedeyay Farmajo iyo Mursal inay ka been...
Ciidamo Somali & Eritrean oo kuso wajahan Muqdisho